Dharka dhididka ee gabadha LY20-040
Qaabka Maya. LY20-040
Dhar: 100% dhogor cudbi ah, 280gsm
Qalab: Cajalad laastik ah, Rhinestone
Feature: Raglan darafta + 3pcs alwaaxyo leh mesh qarka cayriin ee midabada double
Faallooyinka: Daabacaadda meelaynta leh rhinestones bir ah, daabacaadda dhogorta dhogorta leh
Dharka diirran ee gabadha / XN-8037
Lugtadan aadka isugu dhow, ee lama huraanka u ah xilliga jiilaalka, waxaa laga sameeyey qaro, cufan, jilicsan oo jilicsan jilicsan mirko. Dharkaan ganaaxa ah ma aha oo kaliya diiran, laakiin sidoo kale dabacsanaan iyo saaxiibtinimo. Waxay leedahay maqaar heer sare ah oo la jaan qaadaya, fluffku ma sahlana in la safeeyo oo laga adkaado, waana mid sii waara oo aan sahlaneyn inuu dhinto oo qalloocsado oo laalaabto ka dib soo noqnoqoshada. Muuqaalka laba-lakabku wuxuu bixiyaa iska caabin dabayl aad u wanaagsan iyo diirimaad muddo dheer soconaya. Suunka dhexda ayaa laga sameeyay dharka jirka oo ...